N'uwe Ịcha Plotter Factory | China n'uwe Ịcha Plotter Manufacturers, Suppliers
RUK Dual-Head CNC Cutter Cutting Machine / akpụkpọ anụ
Akwa akwa Template Cutting Machine-MC03
Akwa akwa Template Cutting Machine-MC02
Atụmatụ: 1. Industry mbụ mma ọrụ, dị ka ọkpụrụkpụ nke ihe onwunwe na-akpaghị aka kpatụ mma omimi. 2. Automatic nkebi ike mmiri, na-edozi nsogbu nke obere sample adsorption. 3. Akwa-agba isi, iji nweta ngwa ọnwụ, sample template ezigbo, zuru okè convergence. 4. uwe template dị mfe, mfe na-amụta, kpamkpam dozie nsogbu nke akwa akwa uwe, 5. Nwere ike jikọọ ọ bụla CAD software, ọtụtụ-eji uwe, akpa, mgbasa ozi na-ebi akwụkwọ, ...
Akwa akwa Template Cutting Machine-MC01
Atụmatụ: 1. Industry mbụ mma ọrụ, dị ka ọkpụrụkpụ nke ihe onwunwe na-akpaghị aka kpatụ mma omimi. 2. Automatic nkebi ike mmiri, na-edozi nsogbu nke obere sample adsorption. 3. Akwa-agba isi, iji nweta ngwa ọnwụ, sample template ezigbo, zuru okè convergence. 4. uwe template dị mfe, mfe na-amụta, kpamkpam dozie nsogbu nke akwa akwa uwe. 5. Nwere ike jikọọ ọ bụla CAD software, ọtụtụ-eji uwe, akpa, mgbasa ozi na-ebi akwụkwọ, ...